Magaalada Xudur oo maanta laga dukaday Salaad roob doon ah. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Magaalada Xudur oo maanta laga dukaday Salaad roob doon ah.
Magaalada Xudur oo maanta laga dukaday Salaad roob doon ah.
Magaalada xudur ayaa markale maanta waxa lagu tukaday salaad roob-doon oo alle looga baryayo nimcadiisa, xilligaan oo guga wali sifiican uga di’in xudur iyo deegaanada kale ee hoos yimaada gaar ahaan dhul beereedka oo dadka beeralayda ah aad uga deyrinyaan maadaama roobabkii sanadkaan lafilayay aan wali di’in.
Guud ahaan shacabka waxa lafara Alle bari shanta salaadood ciribtooda masaajidada waa lagu qanuudaa, maalmihii lasoo dhaafay waxa jiray Qur’aan si wada jir ah culimada u akhrinayeen, banaambaxaan salaada lagu tukadayna waxana ka soo qeyb galay culimaa’udiin, masuuliyiinta deegaanka iyo bulshada inteeda kale, marka laga baxay salaada culimada waxay soo jeediyeen in Alle loo towbadkeena.
Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa sheegey in dadka reer Xudur intooda badan beeraley yihiin, isla markaana aysan jirin wado kale oo dadka ay beerahooda ku waraabsan karaan hadii roob la waayo.
Magaalada Xudur oo maanta laga dukaday Salaad roob doon ah. was last modified: May 17th, 2021 by Admin
Dowladda Soomaaliya oo shirkad diyaaraddeed oo ka diiwaan gashan Kenya ka mamnuucday dalka
Qaar ka mid ah wadamada carabta oo cambaareeyay weerarkii Yahuuda masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus
Prof Jawaari “Doorasho Qof Iyo Cod Ah Ma Dhici Karto”